Noho izany dia notanterahin’i Todisoa Andriamampandry kandida depiote natolotry ny TIM ny fanamby nataony tamin’ny fampielezan-kevitra ka natolony ny sabotsy teo ny “mégaphone” iray avy avy ho an’ireo fokontany 10 miampy iray ho an’ny Fikambanan’ny mpikabary. Mbola tena toavin’ny olona ny kabary eny, ka misy fifaninanana eny Antehiroka, ary ho avy ny an’Ambohimanarina, izay izy no raiamandreny mpiahy. An-jatony no nifanintsana ka 13 jolay ny famaranana makotroka. 1 000 000Ar ny loka ho an’ny voalohany, ary tsy ampoizina na “surprise” kosa ho an’ny faharoa sy fahatelo. Amin’ny maha olom-pirenena, dia mijery ny tanora 18-25 taona izy, ka misy ny fampiofanana informatika ary efa mandeha ny andiany voalohany, hitohy izany ao anatin’ny 5 taona. Tsy adino ny vehivavy amin’ny resaka asa tanana sy fiofanana momba ny asa fihariana hahafahany mivelona. Hatao modely amin’ny fampandrosoana i Ambohimanarina, ary tsy maintsy tanterahiko ny teniko sy ny fampanantenako fa aza matahotra ianareo, hoy i Todisoa Andriamampandry.